သင့်ဘာသာစကား အတွက် Google — MYSTERY ZILLION
သင့်ဘာသာစကား အတွက် Google
January 2009 edited September 2009 in Open Source
ကျွန်တော် 2004 လောက်ကတည်းက Google ကို မြန်မာလို ရအောင် လုပ်ဖို့ အတွက် Google က ဖွင့်ပေးထားတဲ့ transconsole အမည်ရှိ Project တစ်ခုကို ဟိုတစ်တို့ ဒီတစ်တို့ လုပ်နေတာကြာပါပြီ။ ဇော်ဂျီတွေ သူယောက်မယ်တွေနဲ့ ပျော်နေချိန်မှာ အင်းဝက ကိုဝင်နဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ စုပြီး ချသဗျာ။ နောက်တော့ ဇော်ဂျီနဲ့ ပေါင်းလှော် ခဲ့ဘူးသဗျ။ လုပ်နေတာက3ယောက်လောက် စိတ်ပါမှ ဆို တော့ 2008 ကျော်လို့ 2009 တောင်မပြီးသေးဘူး ဘန်းကျော်သားတို့ရေး။
အခု ကိုပီစီက မြန်မာအတွက် Google က မထောက်ပံသေးဘူးဆိုပြီ အော်တော့မှ ကျွန်တော်လဲ သတိရလို့ အဲ့ Project ကိုပြန်ချပြဖြစ်တာ။ ကဲ ကျွန်တော်တို့ လူအင်အားနဲ့ လုပ်လိုက်ရင် 2009 အတွင်းမှာပဲ google က မြန်မာအတွက်
www.google.com.mm များ ပေါ်လာရင် အားလုံး ဝမ်းသာစရာမလား။
ကတော့ Project Homepage
Language Product Burmese Google Main Search Site (35% complete) *
Groups Beta (2% complete)
Knol (0% complete)
Main Site Help Pages (6% complete)
Picasa2 (3% complete)
Wireless (20% complete)
Wireless Transcoder (4% complete)
ကပြီးသလောာက် Project Progress ပေါ့။ ပြန်ပြင်စရာတွေ လဲ ရှိဦးမှာပါ။
ချလိုက်ကြစို့ MZ ဝိုင်းတော်သားတို့ ရေး။
ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် ကူညီဖို့အသင့်ပါပဲခင်ဗျာ..... အခု ဖတ်နေပါတယ် အဲဒီအကြောင်း.....
ဘာကူနိုင်သလဲပြော ... ကူမယ်
ဟေ့ Google ကမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတော့ Microsoft ကတော့ရော ထောက်ပံ့လို့လား။
ွGoogle ကိစ္စကတော့ Sanction နဲ့ ဆိုင်မယ် မထင်ဘူးဗျ ...
ကျွန်တော် တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ၀င်ရေးပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ......
Google ထဲကို၀င်ပြီး သုံးကြောင်းလောက်တော့ပြန်ကြည့်ပြီးပြီ။
အဲလိုမဟုတ်ဘဲ လွယ်တာကျော်လုပ်ချင်ရင် ဘယ်လိုသွားရမလဲ။
ကျွန်တော်လည်း www.google.com.in လားမသိဘူး အဲဒါကိုတွေ့တော့ စိ်တ်ကူးမိသေးတယ် ပြန်စမယ် ဆိုရင်တော့ ကောင်းတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် မြန်မာအိုင်တိသမိုင်းမှာ မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်မှာပဲဗျ ကောင်းပါတယ်လုပ်ဗျား ကူပေးမယ် (သားသားကိုလည်းမချန်ထားနဲ့နော်)
ဒါဆိုရင် မြန်မာမှာ ဘာfont ကိုအခြေခံသုံးမလဲဆိုတဲ့ပြသာနာပေါ်လာပြီ ကျွန်တော်အခုကြည့်လိုက်တာ တခြား font တွေကိုရိုက်ထားတာတွေတွေ့တယ် ဗျ
အဲဒါကို အရင် သတ်မှတ်ပြိးမှ ဆက်လုပ်တာကောင်းမယ်ထင်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒီဟာက ဘယ်သူမဆိုရိုက်နိုင်တာလေးပါ ကျွန်တော်တို့က zawgyi ကိုရိုက်လိုက်ပါပြီ ဒါပေမယ် တခြားလူက ပိတောက်ကိုသုံးူပြီးရိုက်သွားရင်ရော ဘယ်လိုမှ မပြီးတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ တခုခုတော့ဆုံးဖြတ်သင့်ပြီထင်တယ်ဗျ
အခုတောင် အဲဒီမှာ ဝ နဲ့ ၀ နဲ့ မကွဲသေးဘူး ေ၇းထားတာလေးတွေ အဲဒါလေးတွေလိုက်ပြင်ရအောင်
လုပ်ကြမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ဘာသာပြန်ပေးမယ်လေ။ မှားရင်တော့ မဆူရဘူးနော်။ :d :d :d
ကျွန်တော်က zawgyi သုံးပြီး ရိုက်ပါ့မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒိကိစ္စ တွေးမိပေမယ့် ဇော်ဂျီတွေနဲ့ရိုက်လိုက်မိတာတောင် အတော်များနေပါပြီ။
ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်မချစ်လိုက်နဲ့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေကြတဲ့ ဖောင့် ဖောင့် ဖောင့်
ယူဇာ အားလုံး အလေးပြုထားတဲ့ ဖောင့်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင် အရင် က win နဲ့ ရိုက်ခဲ့တာ win ကနေ Zawgyi ဖြစ်သွားပြန်တော့ ပြောင်းရိုက်ပြန်ရော။ အင်း ကျွန်တော် အကြံပြုချင်တာကတော့ Unicode 5.1 enable ဖွန့်တွေ ပဲသုံးစေချင်တယ်။ ဒါမှ ရေရှည် မျှော်မှန်းရာရောက်မှာလေ။ ပဒေါက်၊ ပရပိုက် ကတော့ 5.1 enable လို့ ပြောတာပဲ Myanmar3မှာ ပြန်ပြင်စရာလေးနည်းနည်းရှိသေးတယ်လို့ ကိုငွေထွန်း ပြောတာပဲ။ အဲ့တော့ ပဒေါက်၊ ပရပိုက် တစ်ခုခုသုံးပြီးရိုက်ပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း ဇော်ဂျီသုံးပြီးတော့ ပြန်ပေးနေပါတယ် အရှည်ကြီးတော့ မပြန်ရသေးဘူး..။ ချက်ချင်းလုပ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေတော့ ချက်ချင်းပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်...ဟုတ်ကဲ့..။ မှားရင်တော့ ဆူနဲ့နော်.. ရိုက်....။
ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတာ အနုပညာတဲ့ Korea ကားတစ်ခုမှ ပြောထားတာတွေ့တယ်။ အနုပညာ ပါပါ ပြန်ကြတာပေါ့ဗျာ။ exiter ရေ မှတ်မိသေးလား ရွေးချယ်စရာလေ။ ဟီးဟီး
ဒါဆို myanmar3ပြီးတဲ့ အထိ ကျွန်တော်စောင့်လိုက်ဦးမယ်ဗျား သို့မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်က ဇော်ဂျီသုံးပြီးရိုက် ပြီးတော့မှ တခြားလူတွေက standard ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ သုံး ကမှကောင်းတယ် ဆိုပြီးပြန်ပြင်နေဦးမယ်
မြန်မာ ၃ မြန်မြန် ပြီးပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ် ဗျား
ပုတောက်တို့ ဘာတို့ဆိုတာက ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်းမရှိသေးဘူးဗျ ဒေါင်းရမယ် မြန်မာ စတန်ဒတ် ယူနီကုတ် ထွက်တော့မှပဲရိုက်တော့မယ်ဗျား
အခုအားလုံး၀ိုင်းပြောကြလို့ ဇော်ဂျီနဲ့ အနုပညာပါပါပြန်ထားတာလေးတွေကို
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ပြန်လိုက်တာတစ်ချို့ ပရောဂျက်မှာ ၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တက်နေပြီလေ။
အခုတော့ စက်မှာဖောင့်မျိုးစုံဒေါင်းလုတ်မလုပ်ထားချင်တဲ့အတွက် ဘာသာပြန်တာနားလိုက်ပြီ။
မသိလို့မေးပါရစေခင်ဗျာ . . .
အဲဒါကျွန်တော် ၀င်ရေးမလို့လုပ်တာ အဲဒီမှာတွေ့တာ 638 ခု ဘာသာပြန်ပြီးပြီလို့ရေးထားပါတယ်
အဲဒါ ကျွန်တော် က ဆက်ပြီးရေးမလို့ပါ
ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာ မန်ဘာတွေ ပြောထားတာက ဂူးဂဲလ် က ခွင့်မပေးဘူးရေးထားတာ
ကျွန်တော် အခု၀င်ရေးလဲ အဲဒါတွေ က အလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့
ဂူးဂဲလ်က ဘာလို့တင်မပေးတာလဲခင်ဗျ . . .
HackingNatt wrote: »
google မတင်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တင်ပေးပါတယ်။ ဆက်မရေးကြဘူးဆိုတာက zawgyi ကို ဆက်ပြီးတော့ support မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် အလကားဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ဆက်မရေးတော့တာကို ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်လည်း အခု ဘာသာပြန်တာ ခဏရပ်ထားပါတယ်။ unicode ဖြစ်တဲ့ Myanmar3 ပေါ်လာရင်တော့ ပြန်ပြီးတော့ ရေးကြမှာပါ။ google က Google Main Search Site ကို ဘာသာပြန်လို့မပြီးမချင်း support မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ရေးထားတာတော့ တွေ့မိပါတယ်။
p.s အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ :77: :77: :77:
မြန်မာ သုံးလေးကို လည်ပင်းတမျှော်မျှော်နဲ့ စောင့်လိုက်ဦးမယ်ဗျား
ရိုက်လို့ ရပါတယ်ဗျာ။ Zawgyi နဲ့ ရိုက်လိုက်လဲ နောက်ပိုင်း converter နဲ့ ပြန်ပြောင်း လို့ ရနိုင်တာကို။ ကော ခက်ပါရောလား။
အော် ဒီလိုလား မသိပါဘူး။ ဒါဆိုရင်တော့ ပြန်ရိုက်တော့မယ်။ :d :d :d
ဆက်ရိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ :d:d:d ဆရာစည် တစ်လုံးချင်းပြောင်းပေးနော်။
ဒီလိုဆို ၀ုိင်း ရိုက်လိုက်ကြရအောင်
မနေ့က 10 ခု တောင် ၀င် ရေးခဲ့သေးတယ် အချိန်မရလို့
နောက်တခုက အဲဒီမှာ ဘယ်သူတွေ ၀င်ရေးလဲဆိုတာသိလို့ ရတဲ့ နေရာ ရှိလားမသိ
တချို့တွေက Group ဖွဲ့ထား တယ် အဲဒီ ဆိုဒ်မှာပဲ
group ကို ၀င်ကြည့်တော့ ၀င်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
နည်းနည်းရှင်းပြပါဦးခင်ဗျာ . . .
ကိုစည်သူေ၇ ပြင်ပုံပြင်နည်း၊လုပ်ပုံ လုပ်နည်း လေးပါထည့်ပေး၇င် တခြား အမ်ဇက် မန်ဘာတွေလဲပြင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ ။ အကြီးဆ၇ာသမားတွေကတော့ တော့လုပ်ဖူးတော့နားလည်ကြမှာပါ ။ကျန်တဲ့သူတွေက စိတ်ရှိပြီးနည်းမသိတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။သူတို့မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ကိုစည်သူတို့မသိနိုင်တဲ့အ၇ည်အချင်းတွေရှိနိုင်မှာပါ။
Main Search Site Translation ဟာ ၁လပိုင်းတုန်းက ၃၅% ကနေ အခု ၉၈% ဆိုတော့ ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့ အရေအတွက် တောှတောှတက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ services တွေအတွက်တော့ တိုးတက်မှု သိပ်မရှိသေးဘူးထင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်တဲ့အခါ စကားလုံး ရွေးချယ်ရတာကြောင့် ကြာနိုင်တာဖြစ်သလို နည်းပညာ ရင်းနှီးမှု မရှိသေးတာကြောင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တောှတောင် ဟိုးတစ်ခါတုန်းက နည်းနည်းပြန်ထားလိုက်ပြီး အခုမြင်မှ ဝင်ကြည့်ပြီး ကျန်တဲ့ ၃၀ ကျောှလောက် အပြီးပြန်ထားလိုက်တယ်။
[HTML]http://www.google.com/transconsole[/HTML] ကိုသွားပြီး ဂူဂဲလ်အကောင့်နဲ့ login ဝင်ပါ။ First Name ဖြည့်ပါ။ Language မှာ Burmese ကို ရွေးပါ။ ကျန်တာတွေက အပိုဖြည့်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ ကြိုက်ရာ project ကို ထပ်ဝင်ပြီး Translate New Messages ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဘာသာပြန်လို့ရပါပြီ။ ဘာသာပြန်ရာမှာလည်း စာလုံးတစ်လုံးထဲ ပြန်ရတာရှိသလို စာလုံးအများရယ် placeholder တွေရယ် ရောပြန်ရတာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဘာသာမပြန်ခင်မှာ Translation guidelines ကို အရင်ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဒီပုံက နမူနာ ဘာသာပြန်ဖို့ နေရာပါ။ Phrase in English က ဘာသာပြန်ဖို့စာဖြစ်ပါတယ်။
Phrase in Burmese က မြန်မာလို ပြန်ရမယ့် နေရာပါ။
Translation help မှာက ဘာသာပြန်ဖို့အခက်အခဲရှိရင် ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ အကြံရနိုင်ဖို့ အစထုတ်ပေးထားတာပါ။ ဒီစာကို ဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတာ မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ skip phrase ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး နောက်တစ်ခုဆီ ကျောှလို့ရပါတယ်။
Thinking about joining the "COMMUNITY_NAME" community on Orkut? Good idea - we'll help you get settled in.
Just follow link below to finish joining:
Or go to the page below and enter this verification code: VERIFICATION_CODE
Hope you like your new community!
Orkut မှ "COMMUNITY_NAME" အသင်းကို ဝင်ဖို့ စဉ်းစားနေပါသလား။ ဒီမှာ အခြေတကျဖြစ်အောင် ကျွန်တောှတို့ ကူညီပါရစေ။
အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။
ဒါမှမဟုတ် အောက်ပါလင့်ခ်ကို သွားရောက်ပြီး ကုဒ်အမှတ် VERIFICATION_CODE ကို ဖြည့်စွက်ပေးပါ။
သင့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကို သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ မျှောှလင့်ပါတယ်။
ဒီဟာက ကျွန်တောှပြန်ထားတဲ့ နမူနာပါ။ မြန်မာစာလုံးကို ပြန်ရာမှာ တိုက်ရိုက်ပြန်လို့မရတာတွေ ရှိပါတယ်။ storage capacity ဆိုရင် ပြောလို့လွယ်ပေမယ့် သိုလှောင်မှု ပမာဏ လို့ပြောလိုက်ရင် ထောက်နေတာမျိုးပေါ့။ အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်ထားပေမယ့် အမှားတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
အကြီးဆရာသမားဆိုတာမျိုးမို့ လွယ်တာမျိုးတော့ မရှိနိုင်ပါဘူး။ Google product ဆိုတဲ့အတိုင်း သုံးတဲ့သူ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတာမို့ အထက်က လမ်းကြောင်းလေးတွေကို ကိ်ုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်သေးရင် ပြန်ဖို့ရာ အခက်အခဲရှိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုစည်သူပြောသလို တစ်ယောက်နည်းနည်းဆီလုပ်သွားကြရင် မကြာတော့ဘူးလို့ မျှောှလင့်ပါတယ်။ ကျွန်တောှတို့ဘက်က အားလုံးပြန်ပြီးသွားရင် ဆန်ရှင်တွေ ဆန်သေတွေ ထည့်မစဉ်းစားလောက်ဘူးလို့ထင်ရတာပဲ။ ပြောတာလဲ များသွားပြီ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်။
Hybrid-Myanmar unicode fonts (such as. Zawgyi, ZawgyiOne fonts) are not ISO-standard, not Unicode compliant, not systematic nor structured.
These hybrid fonts are clicking time-bombs! They are disasters for your future. They are just temporary solutions.
As soon as Microsoft Windows or all other operating include the Myanmar language support, all the systems and all the web sites you have developed using Zawgyi will go crash (unreadable). Lots of your work will go down the drain. It is because they are violating many Unicode development guidelines.
We have warned about this in the local mediaalong time ago. Don't allow their mistakes become your mistakes. Are you willing to waste your time? Your work? Your money?
Upgrade to Unicode-compliant ISO standard systems such as Myanmar3 and other new alternatives which are 100% Unicode-compliant.
If you haveaweb site or blog using ZawGyi font, MCF is giving you FREE upgrade tools (migration utilities). Please download or contact NLP team.
If you are using Myanmar1, Myanmar2, or Zawgyi fonts, you need to UPGRADE NOW!
ကျနော် လည်း ကူညီပေးမယ်နော်။
Project Home ကို သွားကြည့်တာ % တော်တော် တက်လာတာတွေ့ရတယ်ဗျ။
၀မ်းသာစရာဘဲဗျာ။ ကျနော်လည်း အခုမှအဲဒါမျိုးသိတာ နောက်တောင်ကျနေပြီထင်တယ်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျနော် တတ်နိုင်သလောက် ၊ သိတဲ့နေရာကနေကူညီသွားပါ့မယ်။
ဒါနဲ့လေ ဇော်ဂျီ အခက်အခဲပါ တခါတည်း အဆင်ပြေရင်ကောင်းမှာနော်။
အဲဒါလေးကော အဆင်ပြေအောင် လုပ်ကြည့်လို့မရဘူးလား။ ကျနော်ကတော့ ဘာမှမသိသေးလို့ မလုပ်တတ်တော့ လုပ်တတ်မယ့်သူများရှိမလားလို့ပါ။